Darpan Nepal – छाला चिलाउनुका मुख्य कारण यस्ता छन्
छाला चिलाउनुका मुख्य कारण यस्ता छन्
Dec 08, 2018Admin123Health0Like
जाडोको मौसममा छाला सुख्खा हुने हुँदा चिलाउन सक्छ। धेरैले जाडो मौसममा तातो पानीले नुहाउने तर चिल्लो पदार्थ मस्चराइज क्रिम नलगाउँदा पनि छाला चिलाउँछ। यसैगरी जाडो महिनामा सरसफाइमा ध्यान नदिँदा लुतो, फंगल इन्फेक्सन, कुनै किराले टोकेर एलर्जी समेत भई छाला चिलाउन गर्दछ। यसैगरी जुम्रा र पेटमा जुका परेर पनि चिलाउने गर्दछ। कुनैबेला दीर्घ रोग जस्तै किड्नीसम्बन्धी समस्या भयो भने ५० प्रतिशत बिरामीमा चिलाउने समस्या हुन्छ। डायलाइसिसमा रहेका ९० प्रतिशत बिरामीलाई चिलाउँछ। कलेजोमा समस्या भएका ८० प्रतिशत बिरामीमा चिलाउने समस्या हुन्छ। ३० प्रतिशत मानसिक समस्या (जस्तो खानासम्बन्धी डिसअर्डर, ओसिडीका बिरामी) मा चिलाउने समस्या हुन्छ। कहिलेकाहीँ मधुमेह बढेर वा जन्डिस भएर पनि चिलाउन सक्छ। छालामा हुने क्यान्सर भयो भने पनि शरीर चिलाउने गर्दछ। शरीरमा रगतको मात्रा, थाइराइडको मात्रा कम भयो भने र दम भएको मानिसको छाला सुख्खा हुने हुँदा पनि शरीर चिलाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ कुनै खानेकुरा खानाले पनि एलर्जी भएर पनि छाला चिलाउँछ।
छाला चिलाउने समस्यालाई ६ विभाजन गरेर पहिचान गर्नुपर्छ
१. छालामा विभिन्न रोग लागेर वा विभिन्न समस्या भएर चिलाउने, गर्भवती भएर चिलाउने, औषधिको रियाक्सनले गर्दा चिलाउने समस्यालाई पहिलो श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ।
२ कुनै दीर्घरोग जस्तै, किड्नी फेल हुने समस्या, कलेजोमा समस्या, दम भएर चिलाउने समस्यालाई दोस्रो श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ।
३ नसा थिचिएर वा ट्युमर पलाएमा वा अन्य कुनै समस्या भएर चिलाउने समस्यालाई तेस्रो श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ।
४ कुनै मानसिक समस्या जस्तै ओडिसी वा अन्य मानसिक समस्या भएर शरीरमा केही दगुरेको जस्तो अनुभूति भएर चिलाउने समस्यालाई चौथो श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ।
५ माथिका सबै समस्याका कारणले गर्दा चिलाउने समस्यालाई पाचौँ श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ।
६ कुनै कारणबिना नै वा कारण पत्ता नलागी चिलाउने समस्यालाई छैठौंं श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ।
बिरामीको समस्या पहिचान गर्नको निमित्त पहिला के कारणले चिलाउँछ? कस्तो किसिमले चिलाउँछ? कुन बेला बढी चिलाउँछ? भन्ने कुरा चिकित्सकले राम्रोसँग सुनिदिनुपर्छ। पहिलो कारण पत्ता लगाएर मात्र उपचार गर्नुपर्छ। कतै शरीरमा गाँठागुठी छ कि छैन, छाला बाक्लो भएको छ कि छैन भनेर पहिला राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्दछ। रगतको जाँच, किड्नीको जाँच, लिभरको जाँच गर्न एक्सरे गर्ने र चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम रोग पत्ता लागिसकेपछि उपचार गर्न सहज हुन्छ। चिलाउने समस्याले मानिसको निद्रा खलबलिएको छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्दछ। निद्रा खलबलिएको छ भने अनेक किसिमको मनोरोग उत्पादन हुने गर्दछ। त्यसैले यस्ता बिरामीलाई निद्रा लगाउने औषधि दिनुपर्दछ।
सुरुमा छाला चिलाउने समस्या भयो भने छालालाई चिल्लो बनाएर राख्ने कोशिस गर्नु पर्दछ। त्यसले पनि भएन भने नचिलाउने औषधि खाने, कुनै बेला नशासम्बन्धी औषधिले पनि चिलाउने समस्या कम हुन्छ। नचिलाउने विभिन्न किसिमका मल्हम हुन्छन्। त्यो लगाउँदा पनि चिलाउन कम हुन्छ। रोगको कारणले चिलाएको छ भने त्यसको उपचार गर्ने। औषधि नखाई विभिन्न थेरापीको माध्यमबाट पनि चिलाउने समस्या हटाउन सकिन्छ। जसलाई धेरै लामो समयसम्म चिलाउने समस्या छ, उसलाई विभिन्न थेरापीबाट निको बनाउन सकिन्छ।
Previous Postपत्थरीका विभिन्न कारणहरु छन् , कसरी हुन्छ पत्थरी? Next Postब्राजिलमा दुई बैंक लुट्न बन्धक बनाइएका पाँचजनासहित ११ जनाको मृत्यु